नुवाकोटकी एक महिलाले जन्माइन् पाँच शिशु,४ शिशु र आमाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. नुवाकोटकी एक महिलाले जन्माइन् पाँच शिशु,४ शिशु र आमाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
नुवाकोटकी एक महिलाले जन्माइन् पाँच शिशु,४ शिशु र आमाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
एक महिलाले पाँच शिशुलाई जन्म दिएकी छन्। थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुति गृहमा सोमबार बिहान नुवाकोटकी २८ वर्षीया सोमिका तामाङले पाँच वटा शिशुलाई जन्म दिएको स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा। कृतिपाल सुवेदीले जानकारी दिए।
पाँचमध्ये चार जना जीवित रहेको र १ जना भने जन्मनुअघि नै मृत्यु भइसकेको उनले बताए । सुवेदीको नेतृत्वमा शल्यक्रियामार्फत बिहान मृत सहित ५ शिशुको जन्म भएको हो । अन्य ४ जनाको एनआइसीयुमा अब्जरभेसनमा राखिएको डा सुवेदीले बताए । ४ जना शिशु र आमाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको डा सुवेदीले बताए ।
डा सुवेदीका अनुसार ८ महिनाको गर्भ भएकी ती महिलाको सोमबार बिहान ४५ मिनेटमा ५ वटा शिशु शल्यक्रियामार्फत जन्मिएका हुन् ।
४ शिशुहरुको तौल क्रमश: १ किलो ९ सय ग्राम, १ किलो ८ सय ग्राम, १ किलो ६ सय ग्राम र ८ सय ग्राम रहेको छ ।
सामान्यतया गर्भधारणका लागि महिलाले अण्डा उत्पादन हुने औषधि सेवन गरेमा वा कृतिम गर्भाधान आइबिएफ गराउँदा धेरै सन्तान जन्मिने सम्भावना हुन्छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको October 5, 2020 October 5, 2020 155 Viewed